Bogga ugu weyn Bangiyada Maalgashiga ee ugu Fiican Australia 2022 | Heerarka, Debaajiga Ugu Yar
In kasta oo Australia aysan waligeed ugu fiicnayn bangiyada maalgashiga muddooyinkii ugu dambeeyay, haddana bangiyadaani ma aysan joojin inay bixiyaan talooyinkii maaliyadeed ee ay u yaqaaneen macaamiisha.
Bangiyada maalgashigu waxay bixiyaan adeegyo u dhexeeya iibsashada curaarta, dammaanadaha ilaa bixinta fursadaha maalgashi qiimo leh.
Si kastaba ha ahaatee, waa xusuus mudan in la sheego inkasta oo ay Australia wax -qabad la'aan tahay; maalgashiyadu waxay isku koobeen mas'uuliyadda ah inay bixiyaan wax badan.
Si naxariis leh u akhri maqaalkan si aad u aragto bangiyada maalgashiga ugu fiican Australia oo aad si kalsooni leh ugu tagi karto qaar ka mid ah talooyinka maalgashiga.
Qeexitaanka Bangiga Maalgashiga?
Sida laga soo xigtay Investopedia, bangiga maalgashigu waa shirkad adeegyo maaliyadeed oo u shaqaysa sidii dhexdhexaadiye macaamil maaliyadeed oo waaweyn oo kakan.
Caadi ahaan, marka shirkad bilawga ah ay isu diyaariso bilowga bixinta bilowga ah ee dadweynaha (IPO) iyo marka shirkad la midowdo tartame, way ku lug leedahay.
Waxay kaloo u shaqaysaa sidii dillaal ama la -taliye maaliyadeed macaamiisha macmiilka ah ee waaweyn sida lacagaha hawlgabka. Markaa, maalgashigu wuxuu la mid yahay inaad iska dhigto lacag aad u badan tahay inaadan u isticmaalin waqti dhow soo noqosho sare laakiin inaad qatar gasho.
Doorkee ayay ka ciyaaraan?
Asal ahaan, bangiyada maalgashiga ayaa kaliya lagu yaqaanay kaalmada maaliyadeed ee ay siiyaan macaamiishooda waaweyn laakiin hadda, xitaa waxay sameeyaan wax ka badan wixii lagu yaqaanay.
Waxaan hoos ku soo qori doonnaa dhowr ka mid ah kaalintooda si aan kaaga faa'iideysanno fursadda aad xoogga saartid taas oo adiga kaa raalli ah kadibna ka raadsan doonta talo maaliyadeed bangiyada ugu wanaagsan Australia.
Qiimaynta wax soo iibsiga iyo u tartamidda heshiiska
Dib u eegista shirkadda
Diyaarinta qandaraasyada iibinta badeecadaha
Bangiyada maalgashiga ayaa ku hawlan sarifka lacagaha qalaad
Ganacsiga iyo xayndaabka
Maxaan ka raadiyaa raadinta La -taliyayaal Maaliyadeed?
In kasta oo aysan ahayn wax adag in la helo la -taliye maaliyadeed oo ku aaddan baahiyahaaga maal -gashi, haddana waxaa jira tallaabooyin aad adigu shakhsi ahaan qaaddo si aad isugu dheellitirto.
Kuwani waa waxyaabaha ay tahay inaad sameyso markaad dooranayso lataliye maaliyadeed.
Tixgeli in ka badan hal la -taliye ka hor intaadan mid la degin oo hubso inaad weydiiso dhowr su'aalood oo khuseeya oo hagaya habka aad u maalgashanayso.
Samee cilmi -baaris gaar ah oo ku saabsan adeegyada la heli karo ee shirkadda, qaab -dhismeedka khidmadda, oo fiiri meesha ay jiraan wax -sheegyada.
Liiska Bangiyada Maalgashiga Sare ee Australia
Bangiga Qaranka ee Australia
Ogow inaan u diyaarinay bangiyadan maalgashiga amar gaar ah.
#1 Kooxda Macquarie
Kani waa bangi maalgashi madaxbannaan oo caalami ah oo Australia ah iyo shirkad adeegyada maaliyadeed. Waxay ku jirtaa isku -darka ugu wanaagsan ee Australia iyo la -taliyaha iibsashada oo leh hanti ka badan $ 495 bilyan oo hoos timaada maamulka.
Waqtigan xaadirka ah, saamiga suuqa waa 17.6% waxayna siineysaa dulsaar ah 0.55% marka qaangaarka kaliya.
Sidoo kale, deebaajiga ugu yar ee aad u baahan tahay inaad ku maal gasho Macquarie Group waa $ 5,000. Si kastaba ha noqotee, waa inaad jirtaa 18 sano ka hor intaadan xisaabin la yeelan Kooxda Macquarie.
Mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee UBS ay ugu sarreyso liiska maadaama uu yahay bangiga labaad ee ugu wanaagsan maalgashiga Australia ayaa ah xaqiiqda ah inay jirto ikhtiyaar la heli karo oo loogu talagalay qof kasta oo doonaya talo dhaqaale, iyadoon loo eegin.
Halkaan UBS, waxaad u baahan tahay deebaaji ugu yaraan ah ilaa $ 1,000 waxayna u kici kartaa boqolaal milyan oo doolar kuwa awooda.
#3 Suisse Credit
Haysashada hanti lagu qiyaasay ilaa $ 787.3 bilyan oo hoos timaada maamulka, Awoodda Suisse ee awoodda maareynta hantida ayaa si tartiib tartiib ah ugu socotey bangigaan maalgashiga si ay u noqoto midda ugu wanaagsan gobolka Aasiya-Pacific.
#4 Bangiga Citi
Bangiga Citi wuxuu ka badan yahay ama ka yar yahay bangiga maalgashiga caalamiga ah ee aadka u wanaagsan oo leh awoodaha ugu fiican ee ku habboon adeegyada maaliyadeed ee ay macaamiishoodu u baahan karaan. Citi waxay hubisaa inay macaamiisha u gudbiso waayo-aragnimo la mahadiyo iyada oo loo marayo kanaalkeeda dhijitaalka ah ee heer caalami ah.
Heerka dulsaarka ay bixiso waxaa lagu heli karaa ikhtiyaarrada lacag -bixinta waxayna leeyihiin caymis dowladda Australia.
Marka, oo leh dulsaar ah 0.60% iyo deebaajiga ugu yar ee $ 250,000, waxaad ku shaqeyn kartaa koonto maalgashi bangiga Citi.
Maaddaama uu yahay mid ka mid ah bangiyada ugu horreeya maalgashiga, adeegyada maaliyadeed, iyo maareynta hantida Australia, JP Morgan wuxuu ilaa hadda u ahaa nidaam taageero shirkadaha ugu muhiimsan adduunka in ka badan 100 dal.
JP Morgan wuxuu ku dadaalaa wax walba oo uu ku sameyn karo xiriir la aamminsan yahay isagoo u gargaaraya macaamiishooda si ay u gaaraan xasillooni ganacsi.
Goldman Sachs wuxuu ku hayaa boos masayr ah warshadaha la -talinta maaliyadeed oo bixiya adeegyo ku saabsan maareynta maalgashiga, dammaanadaha, dillaalka ra'iisul -wasaaraha, iyo hoos -u -dhigidda dammaanadaha.
Sida muuqata, qofka ugu dhow ee la tartamaya bangigan maalgashiga waa JP Morgan. Cilmi baaris sida uu qabo Forbes waxay muujineysaa in dakhliga guud ee bangiga maalgashiga Goldman uu sii kori doono.
#7 Bangiga Qaranka Australia
Waxaa la aasaasay 1893, NAB hadda waa xoog aad u xoog badan oo ka jira warshadaha bangiyada oo qancinaya in ka badan 12 milyan oo macaamiil ah oo adduunka ku baahsan.
Macmiil ahaan, waxaad la xiriiri kartaa Bangiga Australia ee qaranka iyada oo loo marayo mid kasta oo ka mid ah laamahooda, xarunta adeegga macmiilka, app -ka moobaylka, bangiga internetka, iimaylka, iyo warbaahinta bulshada.
Debaajiga ugu yar ee ay tahay inaad ku baxdo qorshe kasta oo maalgashi waa $ 5,000 intaad filayso in dulsaarkaagu noqdo 0.30%.
Waxa xiisaha lihi, waxaad dooran kartaa inaad hesho dulsaarkaaga bil kasta, sanadkiiba laba jeer ama xataa sanadkiiba.
Waxaa jira adeegyo aad u fara badan oo bangigan Australia uu siinayo macaamiisheeda isla markaana leh saamiga suuqa 3.9%, wuxuu ka koray xeebaha Australia ilaa Aasiya, New Zealand, iyo Boqortooyada Ingiriiska.
Heerka deebaajiga ee bangigan wuxuu u dhexeeyaa qadar dhexdhexaad ah oo ah $ 5,000 ilaa xad xad -dhaaf ah oo ah $ 1,999,999. Sidoo kale, dulsaarka dulsaarka maalgashiga ee heerka qaan -gaadhka ee 6 bilood wuxuu dhaliyaa 0.35% ama 0.55% muddo sannad ah.
Waxaan sharad ku galay inaadan ogeyn in bangiyada maalgashigu ay macaamiishooda siin karaan xalal wax ku ool ah oo ku saabsan welwelkooda maaliyadeed.
Tan iyo markii la aasaasay bangigan Australia 1935, Morgan Stanley wuxuu ka shaqeeyaa in ka badan 42 dal oo adduunka oo dhan ah.
Adeegyadeeda gaarka ah ayaa u gogol xaadhay in loo aqoonsado mid ka mid ah bangiyada maalgashiga ugu wanaagsan Australia. Iyaga oo maanka ku haya heerkii khubarada halkaa joogtay, Morgan Stanley ayaa taagan.
Gebogebadii, bangiyada maalgashiga ee kala duwan ee Australia ayaa lagu diyaariyey miis ay la socdaan qiimahooda iyo deebaajiga ugu yar.
1. Kooxda Macquarie 0.55% $ 5,000
2. UBS $ 1,000
3. Amaah Suisse 0.60% $ 500,000
4. Bangiga Citi
5. JP. Morgan 0.10% $ 1,000
6 Sachs Goldman
7. Bangiga Qaranka Australia 0.30% $ 5,000
8. CBA 0.55% $ 5,000
9. Morgan Stanley 0.01% $ 500,000
Dib -u -eegista La -taliyaha La -talinta ee Motley Fool
Waxaa jira sababo badan oo loo furo xisaab bangi, gaar ahaan marka aad tahay qof weyn. Marka la soo koobo, dad badan ayaa ku weydiin lahaa…
Faallooyinka CrowdStreet 2022: Ma mudan tahay? Been ama Sharci | Talooyin | Geedi socod
Dhawr sano ka hor, noqoshada maal-galiyaha hantida ma-guurtada ah waxay la macno tahay in la helo dilaal si uu u qiimeeyo yoolalkaaga maaliyadeed…